Qaran-dhisku waxa uu ku yimaaddaa is-oggolaanshiyaha ummadda...W/Q Maxamed Xaaji
Saturday 3rd November 2018 12:02:58 in Aragtida Dadweynaha by Madaxa Wararka
Qaran-dhisku waxa uu ku yimaaddaa is-oggolaanshiyaha ummadda. is-oggolaanshiyaha ummaddana waxa keliya ee keeni karaa waa dawladda, mucaaridka iyo inta indheer-garadka ah oo wanaagga iyo wax isku ahaanshiyaha shacabka biirisa.
Midnimada ummadda wax diciifiya ayaa jira. In taa la fahmo oo ciriqeeda la saaro ayaa danta saxda ahi ku jirtaa. Si wal oo ay dawladnimadu u dedaasho haddii aan midnimo ummadeed la gu kaalmaynin hawlaha qaran-dhiska iyo dedaalka dawladnimadu ma muuqdaan.
Tabaca dawladaha waxa qurxiya midnimada ummadda. Midnimada ummaddana waxa ugu weyn ee la gu kasbaa waa siyaasad wada socota oo dan ku midaysan. Siyaasad arrimo dibadeed oo ay goonyaha ka joogaan dadka qaranka wada leh iyo hay'aadka dawliga ah ee mucaarid iyo muxaafidba leh.
Dadkeenu inaysan gobanimada u qalmin waxaad ku garanaysa labbadan arrin
"Dunida Waxay Wajaheysaa Kiisaska Coronavirus Ee Ugu Badnaa" Haa'ayadda Caafimaadka Aduunka Ee WHO.